မိသားစုနဲ့အတူ မွေးနေ့ကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် | Duwun
ဘုရားသွားပြီး အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က မွေးနေ့ကို မိသားစုနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းပြီး အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရှင်လှတဲ့ သူမရဲ့ မွေးနေ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
Photo : ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်
အနုပညာအလုပ်တွေ စလုပ်ကတည်းက မျက်ဝန်းပြာပိုင်ရှင်လေးဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေ အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ဟာ အခုချိန်ထိ လည်း သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို မျက်ဝန်းပြာလေးနဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားနေတုန်းပါပဲ။ ဒီနေ့(ဇွန်လ၂၃ရက်)က သရုပ်ဆောင် ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူခဲ့ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ ဖြတ်သန်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိလှ တဲ့ မွေးနေ့ မနက်ခင်းလေးမှာ တရားထိုင် ပြီးရွှေတိဂုံဘုရားကိုမိသားစုနဲ့တက်ရောက်လှုဒါန်းခဲ့ပြီးရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ် . မြတ်စွာဘုရား , တရား, သံဃာ နဲ့ကျေးဇူးရှင်သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကို ဦးတိုက်ပါတယ်. "“ ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ မိခင်နဲ့ ကျေးဇူးရှိတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်း သူမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ဝေမျှထားပါသေးတယ်။ထို့အပြင် အခုချိန်ထိ သူမကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြောထားပါသေးတယ်။ သူမအနေနဲ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုနေရာပဲ ရောက်ရောက် သူမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေကို မမေ့ပါဘူး ပြီး သစ္စာဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားထားခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ဟာ CKKP ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ အတူ အနုပညာလောက ထဲကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည် ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လည် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမဟာ ZZ Gems and Jewelry ဆိုင်လေးကိုလည်း ဖွင့်ထားပါသေးတယ်။ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ဟာ အခုဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ထူထောင်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။